किन बन्दैछ सरकार एनजीओको खेलौना ? | Ratopati
personप्रभुनारायण बस्नेत exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १६, २०७५ chat_bubble_outline0
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) नामको विवादास्पद संस्थाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागिताले नेपालको संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ । दक्षिण कोरियाका क्रिस्चियन सन म्यङ मुनले शान्तिको नाममा धर्मप्रचार हेतु स्थापना गरेको यूपीएफले संसारभरि धर्म परिवर्तन गराउने भूमिका खेलेर बद्नाम छ । नेपालमा आयोजना गरिएको एसिया प्यासिफिक समिटमा मुनकी श्रीमतीलाई येसुख्रिस्टकी एक मात्र पुत्री घोषणा गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । धर्मपरिवर्तनको उद्देश्यबाट सञ्चालित एउटा आईएनजीओको कार्यक्रममा धर्मनिरपेक्ष देशको सरकार प्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । सुरुमा यो समिटको वेभसाइटमा नेपाल सरकार सहयोजक भनेर राखिएको थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त्यसको विरोध गरेपछि सहआयोजक भन्ने वाक्य हटाएर नेपाल सरकारद्वारा समर्थित भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको हैसियत के हो ?
यसरी भूमिका परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मौन छ । सुरुमा सहआयोजक बस्न सरकार किन राजी भयो ? सरकारलाई आयोजक बनाउन राजी गराउने त्यस संस्थाले के ग¥यो ? नेपाल सरकार आयोजक नै हो भने आयोजक समितिमा सरकारका कुन कुन मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव आदिले के जिम्मेवारी लिएका थिए । मुनकी श्रीमतीलाई यसु ख्रिस्टकी छोरी घोषणा गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल सरकार त्यो बैठकमा सामेल थियो कि थिएन ? धर्मनिरपेक्ष मुलुकको सरकारले एउटा धर्मको प्रचार प्रसार झल्कने गरी त्यस्तो निर्णयमा सहभागिता जनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो जिज्ञासाको उत्तर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ, त्यो तिनको हक हो ।
होइन, नेपाल सरकार सहआयोजक होइन, आयोजक संस्थाले बिनास्वीकृति सरकारको नाम र लोगो प्रयोग गरेको हो भने पनि उसले त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ र त्यसो संस्थामाथि कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । के सरकारको अनुमति नै नलिई कुनै संस्थाले त्यति ठूलो कार्यक्रमको सहआयोजक राख्ने धृष्ठता गर्न सक्छ ? अहं त्यो पत्याउन नसक्ने कुरा हो । यदि गरेकै रहेछ भने सरकारको औकात के हो भन्ने यसले प्रष्ट गर्छ ।
अब सन्दर्भ भूमिका परिवर्तनको प्रसङ्ग कोट्याऊँ । प्रतिपक्षी दलले मुलुकलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा छाडेर सरकार एउटा एनजीओको कार्यक्रमको आयोजक बनेको कुराको विरोध ग¥यो । त्यो स्वभाविक पनि हो, प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना, विरोध गर्छ । जिम्मेवार सरकार रहेछ भने त्यसलाई प्रष्ट पार्नतिर लाग्छ । गरेको कामको वैधता र औचित्य पुष्टितर्फ लाग्छ । होइन गैरजिम्मेवार र लाचार सरकार हो भने मौन रहन्छ । तर यहाँ त सरकार योभन्दा भिन्नै रूपमा प्रस्तुत भयो । उसले आफू त्यो संस्थाको कार्यक्रमको सहआयोजक बसेको हो कि होइन भन्ने प्रष्ट पनि गरेन र अधिकारिक जानकारीविनै सहआयोजकबाट समर्थक बन्न पुग्यो । त्यसो गर्नमा सरकारको कुन निकाय संलग्न छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव कसको इसारामा त्यो काम हुँदैछ ? सरकारसँग स्वीकति नलिई सहआयोजकमा राखेको हो भने सरकार त्यस बेला किन मौन रह्यो, अहिले आधिकारिक ढङ्गले फिर्ता भएको घोषणा नगरी नाम कसरी हटाइयो ? सरकारले कार्यक्रम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने वित्तिकै समर्थन छ भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । अहिले सहआयोजकबाट नाम हटाएर सरकार समर्थित भन्ने वाक्यांश किन राखियो । सरकारको सन्दर्भमा भूमिका निर्धारण गर्ने, हैसियत तय गर्ने र निर्णय गर्ने काम एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफूखुशी गर्दै त छैन । यदि गर्दैछ भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसप्रति सबै नेपाली सजग हुनुपर्छ ।
कार्यक्रम एनजीओको खर्च सरकारको !
नेपाल सरकारसँग यस कार्यक्रमका लागि ३२ करोड ५० लाख खर्चको माग गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा बाटोको खाल्डाखुल्डी टाल्न २० करोड, सुरक्षा व्यवस्था गर्न ११ करोड र पाहुनाको स्वागत गर्न ५० लाख माग भएको छ । एउटा विदेशी संस्थाको सम्मेलनका लागि नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यत्रो खर्च किन गर्ने ? केही समयअघि भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा गरेको खर्चको क्षतिपूर्ति हुन पाएको छैन, अब अर्को त्योभन्दा डबल खर्च गर्ने कुराको औचित्य देखिँदैन । अस्थायी रूपले खाल्डाखुल्डी टाल्न प्रयोग हुने त्यो खर्चले कुनै नयाँ बाटो निर्माण हुन्छ वा कुनै बिग्रेको सडक पुनः निर्माण हुन्छ । दुई दिनका लागि २० करोड खर्च गरेर बाटो टाल्यो भोलि उस्तै हुने हो । दुई दिनका लागि देखाउन गरिने खर्चप्रति नेपाल सरकार कठोर बन्नै पर्छ । यस्ता फजुल खर्ची प्रवृत्तिमाथि कठोर नियन्त्रण गर्नै पर्छ । कार्यक्रम एनजीओको निम्तालु सरकारका यो विचित्रको कुरा हो । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि आफैले निम्ता दिएकाले नै विभिन्न देशका सरकार, संसदमा प्रतिनिधि आएका हुन भने त्योभन्दा ठूलो बिडम्बना अरू हुन सक्दैन । नेपाल सरकार कसलाई खुशी पार्न एउटा धर्म प्रचारसँग सम्बद्ध कार्यक्रममा निम्तो बाँड्दै हिँडेको छ ? के येसुकी एक मात्र छोरी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा नेपाल सरकार आयोजक भएर निम्तो बाढ्दै हिँड्न मिल्छ ? यो प्रश्नको पनि सरकारले उत्तर दिनुपर्छ ।
तीन महिनाअघि बिमस्टेकको खर्चले ढाड भाँचिएको सरकाले एउटा एनजीओको कार्यक्रमा खर्च गर्न कसरी तयार भयो ? यदि यसैगरी खर्च गर्दै जाने हो भने छोटो अवधिमै सरकार टाट पल्टने निश्चित छ । यस पटक एउटा एनजीओले खर्च गराउँछ, अर्को पटक अर्कैले गराउँछ । सरकारले एनजीओ आईएनजीओलाई विकासको साझेदारी बनाउनुपर्नेमा स्वयम् सरकार एनजीओको खर्चको साझेदार बन्नु विडम्बना हो ।
जे भए पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति एउटा एनजीओ कार्यक्रमको आयोजक समिति अध्यक्ष बन्नु उचित हुँदैनथ्यो । आफ्नो गल्ती छोप्न नेपालले सम्मेलन धार्मिक प्रायोजनका लागि नभएको दाबी गरेका छन् । त्यो पनि सत्य होला, उनलाई यो सम्मेलन धर्मसभा होइन भनेर विश्वास दिलाइएको पनि होला । तर त्यसको सन्देश चाहिँ के जान्छ ? त्यही कार्यक्रममा यसुकी पुत्रीको घोषणा गरिनुले प्रकारान्तरले धर्म प्रचारको अर्थ दिन्छ कि दिँँदैन ? यो धर्मसँग कुनै सरोकार नभएकै कार्यक्रम होला तर एउटा आईएनजीको कार्यक्रमको चियर गर्न तयार हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले के ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसको त हेक्का हुनुपर्ने होइन र ?